I-t-mobile ithengisa i-walmart mobile mobile kanye nababhalisile bayo abayizigidi eziyi-1.4 kwi-tracfone
none Izindaba Nokubuyekezwa I-T-Mobile ithengisa iWalmart Family Mobile kanye nababhalisile bayo abayizigidi eziyi-1.4 kuTracfone
I-T-Mobile ithengisa iWalmart Family Mobile kanye nababhalisile bayo abayizigidi eziyi-1.4 kuTracfone
Inkampani yesithathu ngobukhulu ezweni, iT-Mobile, imemezele ngoLwesithathu ukuthi isidayise iWalmart Family Mobile kanye nababhalise ngayo abayizigidi eziyi-1.4, eTracfone. Ngaphambi kokutholwa, iTracfone isebenzise amakhasimende angenazintambo ayizigidi ezingama-26 e-U.S., Puerto Rico nase-U.S.Virgin Islands. ITracfone iyi-MVNO enkulu kunazo zonke ezifundazweni, ithengisa izingcingo ezisekela wonke amanethiwekhi amakhulu ase-U.S.
Imikhiqizo yeTracfone ifaka phakathi iNet10 Wireless, Straight Talk ne-SafeLink Wireless. Ukwengezwa kweWalmart Family Mobile kuyinto exakayo ngoba iTracfone isivele ingumnikazi wesaphulelo esiphezulu eWalmart, okuyi-'Straight Talk. ' I-Walmart Family Mobile yethulwa ngo-2010 ngenkathi iWalmart izama ukufakazela ukuthi amakhasimende akhokhelwa kusengaphambili angathenga izingcingo eziphathwayo futhi akhokhele izinsiza kumanethiwekhi ahloniphekile.
Izithwali eziningi ezinkulu ezikhokhelwa kusengaphambili zandisa imisebenzi yazo yokuthengisa kulo nyaka. IMetroPCS ingeze izindawo eziyinkulungwane ngo-2016, kanti iCricket izobe isivule izitolo ezintsha ezingama-900. IBoost Mobile nayo izophela ngo-2016 ngenani elikhulu lezitolo ezintsha zezitolo zezitini nodaka. Lezo zithwali ezintathu ezikhokhelwe kusengaphambili ziphethwe yi-T-Mobile, i-AT & T ne-Sprint, ngokulandelana.
Ngamasu entengo aphansi angenamkhawulo kanye neziphathamandla ezisezingeni eliphakeme ezithengiswayo, ibhizinisi elikhokhelwa kusengaphambili akulona ongakhumbula ukuthi liyiminyaka embalwa eyedlule lapho kunenhlamba exhunywe ekubeni ngumbhalisi okhokhelwa kusengaphambili.
umthombo: Ulaka olungenantambo
izesekeli ze-iphone 12 pro max
Umvikeli wesikrini esincane se-iphone 12
guqula uhlu lube ukuhlelwa kweJava
Ukuvuselelwa kwe-Snapchat kungeza isici esisha 'Sezindaba Zangokwezifiso' ku-Android naku-iOS
I-Samsung Galaxy Note 5 iqala ukuthola i-Android 7.0 Nougat eSprint
Amadili weFitbit Black Friday aphumile: gcina imali enkulu kuFitbit Charge HR, Charge, Flex no One
Ama-Apple & apos; s iPhone 11 Pro ne-11 Pro Max athengiswa ngezaphulelo ezinkulu ngaphandle kokuhweba okudingekayo
I-Apple iPhone 6s Plus vs Samsung Galaxy Note5
I-Samsung Galaxy S7: I-Snapdragon 820 vs Exynos 8890 flavour kuqhathaniswa
Iziphesheli ezihamba phambili ze-Cyber ​​Monday 2020: okunikezwayo okuphezulu kusatholakala
Ungayicisha kanjani i-5G ku-Samsung Galaxy S21
Imidlalo emi-5 emihle kakhulu ye-Superman ye-Android ne-iOS - gcina iplanethi njengeNdoda Yensimbi!
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze-S-Pen ze-Galaxy Note 8